စနူကာကြယ် APK ကို | အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » စနူကာကြယ်
စနူကာကြယ် APK ကို
မိုဘိုင်းပေါ်ရှိအရှိဆုံးလက်တွေ့ကျကျ Snooker ဂိမ်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်အလုံအလောက်ရိုးရှင်းပြီးမည်သူမဆိုကစားနိူင်သည်။ သို့သော်အနုစိတ်ရှုပ်ထွေးရန်သင့်အားနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်သင်ကြားနိုင်သည်။
Play Snooker ၏စစ်မှန်သောခံစားမှု
ငါတို့သည်သင်တို့၏လမ်းထဲကရရှိသွားတဲ့နှငျ့သငျနီးပါးဂိမ်းထဲမှာရပ်နေကြသည်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရစေသည်ရိုးရှင်းပြီးတိကျမှုထိထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ မိုဘိုင်း device ကိုအပေါ်တစ်ဦးစနူကာကစားသည့်သဘာဝခံစားရတယ်, သင်သည်စနူကာနယ်ပယ်ထဲမှာရပ်နေကြတယ်တဲ့ခံစားချက်ထပ်ဖွသငျ့သညျ။ ထုတ်ကြိုးစားပါကဂိမ်းထဲမှာဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့ခံစားရ!
ရူပဗေဒမဆိုစနူကာကစားပွဲသို့မဟုတ်ရေကူးကန်ဂိမ်း၏ရိုက်နှက်မှုနှလုံးပါ! သေချာကဘိလိယက်၏ရီးရဲလ် Feeling ကယ်မနှုတ်နိုင်စေရန်: ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်းသာရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူတော်လှန်ရေးရူပဗေဒ Engine ကိုတညျဆောကျအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကထွက်စမ်းသပ်ဖို့သငျသညျကိုစိန်ခေါ်: လှည့်ဖျား, cue အရေးယူမှုသည်ဘောလုံးခြိုးဖောကျ, အကူချွတ်ရိုက်ချက်များ။ ဒါဟာအစစ်အမှန်အရာကဲ့သို့ပြုမူ!
ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိကျမှန်ကန်မှု၏ဤအဆင့်အထိရောက်ရှိရန်ပင်အများဆုံးသေးငယ်သောအသေးစိတျ၏လေးနက်ခြင်း simulation ကြာနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှလာမယ့်အဆင့်ကိုရေကူးကန်ရူပဗေဒဆောင်ကြဉ်းနိုင်စေဖို့အထူးသဖြင့်ဂုဏ်ယူများမှာ!
အပတ်စဉ်အွန်လိုင်းစနူကာပြိုင်ပွဲများတွင်သင်၏နေရာကိုယူပါ။ အွန်လိုင်းပွဲစဉ်တိုင်းသည်သင့်အား Snooker League ရှိထိပ်ဆုံးနေရာနှင့်နီးကပ်စေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အချို့သောအားကစားလှုပ်ရှားမှုများကိုနှစ်သက်ပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုရှိပါကဤဂိမ်းစနစ်သည်သင့်အားနာရီများစွာကြာအောင်ဖျော်ဖြေပေးလိမ့်မည်။
သင်၏ Facebook သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ Snooker ကလပ်တစ်ခု ဖန်တီး၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၏စိန်ခေါ်မှုတိုင်းတွင် Snooker ချန်ပီယံဆုအတွက်အွန်လိုင်းတွင်သူတို့ကိုစိန်ခေါ်ပါ။ အခွင့်အရေးများကိုစိတ်ကူးယဉ်လှည့်ကွက်အချို့နှင့်ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း၊
အခန်း၏ခံစားခြင်း, ပွတ်ဘောလုံး၏အတောက်ပခြင်း, စနူကာစားပွဲ၏ဒဏ်ငွေသစ်သား, ဒီတစ်စနူကာကြယ်အတွေ့အကြုံများလေထုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပွတ်ဖိနပ်နှင့်တစ်ဦးလေးကိုလည်စည်းပေါ်တွင်တင်နှင့်စနူကာအရေးယူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အချိန်ပဲ!
Snooker Stars ဂိမ်းကိုယခု download နှင့်ပျော်ရွှင်ပါစေ!
- ရာသီ 25
Snooker Stars - 3D အွန်လိုင်းအားကစားဂိမ်း
65.41 ကို MB